Izoqala ukukhonjiswa ngoFebhuwari iLove Island SA
KULINDELEKE ukuthi luqale ukukhonjiswa kuthelevishini kuM-Net (101) ngoFebhuwari ngonyaka ozayo uhlelo lwabantu abafuna uthando isizini yokuqala yalo ezoqoshelwa eWestern Cape maduzane.
Ukufaka izicelo kwabafuna ukuhlanganyela kwiLove Island South Africa kuvulwe ngeSonto. Konke okuthinta uhlelo kutholakala kwi-website yakwaM-Net.
Uhlelo, olwaqalwa yinkampani yokuqopha yaphesheya kwezilwandle i-ITV Studios luzoqoshwa yinkampani iRapid Blue eNingizimu Afrika.
Umphathi eM-Net, uNkateko Mabaso, uthe bajabule ukuba nobuhlobo ne-ITV Studios okubenze baba mdibi munye namazwe ahlukene emhlabeni azenzela uhlelo olufanayo emazweni awo.
“Kuyajabulisa ukuthi ekugcineni nathi sesizoba nolwethu uhlelo olukhulu emhlabeni futhi olunabalandeli umhlaba wonke. Lokhu kukhomba khona ukuthi iM-Net ifuna ukulethela ababukeli bayo izinhlelo ezihamba phambili futhi ezibajabulisayo,” kusho uNkateko.
Uthe uhlelo luzokhombisa abantu besifazane nabesilisa abafuna ukuba nabazothandana nabo.
‘’Bazobonakala befika lapho bezohlala khona bezofuna uthando kodwa oluzoqala ngobungani kuze kuthi uma kukhona ababonayo ukuthi amagazi abo ayezwana bese beyiqala into yabo. Ekuhambeni kwezinsuku abahlulekayo ukuthola umaqondana bayobe sebehamba.
Kungalindeleka izingqinamba abantu abathatha le ndlela engekho lula ababhekana nazo bonke. Izingqinamba zidalwa ngabantu abasha abalokhu befika, okwenza abanye bashintshe umqondo ngabantu abakade sebebatholile. Abazobe behlanganyele kumele bazakhele ugazi kubabukeli ngoba yibona ekugcineni abanikwa ithuba lokuvotela izithandani ezenze uhlelo lwathakaselwa,” kusho uNkateko.
Umphathi e-ITV Studios, uMaarten Meijs, uthe sebekulindele ngabomvu ukubona ukuthi ababukeli bazolujabulela kanjani uhlelo nanokuthi iM-Net izolwenza kanjani luhambisane nosikompilo lwaseNingizimu Afrika uma kukhulunywa ngezothando.
LUZA eNingizimu Afrika uhlelo iLove Island South Africa. Isiteshi iM-Net sesiveze ukuthi sizoqala ukulukhombisa ngonyaka ozayo Isithombe: SITHUNYELWE